द्वन्द्वमा दुई छोरा गुमाएकी आमा –…..प्रचण्डले मेरा छोराको रगतको महत्त्व बुझेनन्……! – Taja Khawar
द्वन्द्वमा दुई छोरा गुमाएकी आमा –…..प्रचण्डले मेरा छोराको रगतको महत्त्व बुझेनन्……!
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र २६, २०७८ समय: १८:४०:३३
बुटवल : रुपन्देहीको सैनामैनास्थित बाँसगढी चोकमा रातो ठूलो गेट छ। आउनेलाई स्वागत र जानेलाई धन्यवाद भनिरहेको त्यो गेट झट्ट देख्दा सामान्य नै लाग्छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै पर्ने सो गेट हुँदै अनगिन्ती मानिसको ओहोर–दोहोर हुन्छ। बाटो हिँड्ने कसैले पनि गेटको बारेमा चियोचर्चो गर्दैनन्। तर गेट र त्यससँग जोडिएका पात्रहरूको कथा भने अस्वभाविक छ। कथा मात्र होइन, पीडा र आक्रोशको पहाड छ।
टिन र टायल जस्तै खपटाले बनाएको सानो घर। घरको आँगन देख्दा लाग्छ, कैयौं वर्षदेखि कसैको पाइलो परेको छैन। चिप्लो, लेउ लागेको आँगनले साँच्चै कसैको प्रतीक्षा गरेजस्तै लाग्छ।
घरको भित्तामा केही पुराना तस्बिर छन्, माला लगाइएका। हामी पुग्नासाथ तुल्सा पाण्डेले नाकदेखि केही तल झरेको चस्मा माथि सारेर हेरिन्। हातको इशाराले बस्न संकेत गरिन्।
चाउरिएको अनुहार, मलिन र शान्त स्वभावमा तुल्सा खाटमा पलेंटी कसिन्। केही गफिनु थियो। केही विगत कोट्याउनु थियो। तुल्सा विगतका दिनलाई मधुर स्वरमा बेलिबिस्तार लगाउन थालिन्। आँसुका धारा बगेका आँखा पुछ्दै विगतका कहानी सुनाउन थालिन्।
घर अगाडिको मैरोमा बिहान पानी चढाउनु र घरभित्र रहेका फोटाहरूलाई पूजा गर्नु उमेरले ७१ वर्ष लागेकी तुल्साको दैनिकी बनेको छ। एउटा घर अनि एक्लो शरीर तुल्साका लागि अहिले ‘सर्वथोक’ हो। तातोपानी तताएर समेत अरूले नै दिनुपर्ने उमेरमा तुल्सा ‘एक्लो जिन्दगी’ काटिरहेकी छिन्, त्यो पनि १८ वर्षदेखि।
नेपालमा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भयो। १७ मानिसले हजारले ज्यान गुमाए। हजारौं अंगभंग भए। कतिका सन्तान बेपत्ता पारिए। द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो। तीन तहका सरकार बने। देश अहिले समृद्धिको यात्रामा छ भनिन्छ।
तर, त्यही द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म पनि धेरैका आँखा ओभाना छैनन्। तुल्सा त्यही द्वन्द्वकी एक ‘साक्षी’ हुन् जसलाई युद्धको पीडाले भन्दा त्यसपछिका दिनहरूले बढी पीडा दिएको छ।
२०४५ सालमा गुल्मीको बाँझखर्कबाट तराई झरेकी तुल्साका श्रीमान् झविन्द्रको २०४४ सालमा गुल्मीमै हृदयाघातबाट मृत्यु भयो। छोरा दुर्गा र युवराजले आमालाई तराईमा झारे।
‘घाइते भएपछि उपचार गर्न भन्दै हिँडेपछि पाँच वर्षसम्म परिवारमा सम्पर्क भएन। पछि निको भएपछि मात्र घर आयो,’ तुल्साले ती दिन सम्झँदै भनिन्, ‘उपचारपछि लुम्बिनी क्षेत्रको इन्चार्ज भयो। तर त्यसको केही दिनमै सुन्डियाबाट युवराज १९ असोज २०६० सालमा पुलिसको गिरफ्तारीमा प¥यो।’
संयोग भनौं या अवसर। दुई सन्तान तत्कालीन सेनाकै कारण गुमाएकी तुल्साकी छोरी विष्णुको बिहे भने नेपाल आर्मीसँगै भयो। भालुवाङका तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका हवल्दार प्रेमबहादुर खत्रीसँग बिहे गरेकी विष्णुले श्रीमानबाट राम्रो साथ पाइनन्।
दुई छोराको जन्म भए पनि खत्रीले सेनामै रहँदा दोस्रो बिहे गरे। त्यसपछि उनी एक्लै भइन्। खत्रीले त्यही महिलाका कारण २०६० सालमा जागिर समेत छाडे।
Last Updated on: September 11th, 2021 at 6:40 pm